Yangon Thu Michelle - Official Website
Portrait & Glamor December 15, 2021
Today is fine and good day. I love my makeup look and feeling good about myself. Let me takeaselfie[…]
Portrait & Glamor December 13, 2021
Hello Monday, my Monday be pink and shine. Dress Dimple Suu Fashion & Collection Bag Trendiest Want to watch more about[…]
Articles December 4, 2021
မီရှဲဆံပင်က အခုဆို ခါးလယ်ကျော်လို့ တင်ပါးတစ်ဝက်အရှည်ရောက်နေပြီ။ ဆံပင်ကို ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်နေ့က ကောက်ထားတာ နောက်ဆုံးပဲ။ ဆံပင်ကို ရှစ်လ တစ်ခါဆေးဆိုးတယ်။ This is all about your guide to hair[…]
OOTD by Yangon Thu Michelle
Portrait & Glamor December 1, 2021
Let’s pretend Yangon has chilling weather OOTD by Yangon Thu Michelle. All are export fashion. View more about my portrait and[…]
8 Low Investment Business Ideas (2)
Articles November 21, 2021
အပိုင်း(၂) မှာတော့ နောက်ထပ် အလုပ်ဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းတွေ (low investment business ideas) ပြောပြပေးထားပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှု့ လိုအပ်ချက်ရှိနေပေမဲ့ လေ့ကျင့်လို့ သိပ်မခက်ပါဘူး။ အောက်ခြေသိမ်းလုပ်ရတာပေမဲ့ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွပါလေ …။
Somewhere in Dawei
Portrait & Glamor November 12, 2021
တောင်တွေကို လွမ်းတယ် သစ်ပင်တွေကို သတိရတယ် သဘာဝတရားကြီးနဲ့ ထိတွေ့ချင်တယ် ချစ်သူလေးကိုတော့ အတမ်းတမိဆုံး ….
Portrait & Glamor November 4, 2021
Happy Diwali to you all. May the charm of shimmering days and lamps make this Diwali the best Diwali for you.[…]
Myanmar Traditional Wedding Portrait
Portrait & Glamor October 25, 2021
Today, I’m gonna share about the Myanmar traditional wedding portrait of me.
ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့က “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျော့ချရေးနေ့ ” International Day for Disaster Risk Reduction Day ဖြစ်ပါတယ်။
Portrait & Glamor September 25, 2021
OOTD of the day အိမ်ရှင်းလိုက် အဝတ်ပုံရှင်းလိုက် အလှပြင်လိုက် ရုံးတက်လိုက် မီးဖိုချောင်ရှင်းလိုက်နဲ့ တစ်နေ့ တစ်နေ့ အိမ်မှာပဲနေရင်း ဘယ်မှကို မထွက်ချင်တော့ဘူး View More on instagram
ညနေခင်းဆို ဟိုဟာ စားချင်သလို ဒီဟာစားချင်လိုစိတ်တွေ ဖြစ်နေလား ချစ်မိတ်ဆွေတို့ရေ … မီရှဲ Foodie Pyayt – ဒေါ်ပြည့်လက်ရာ က လုပ်ပြတဲ့ ငှက်ပျောသီး ဂျုံကြော်ကို ကြော်ပြထားပါတယ်။ မုန့်လုပ်စားရတာကို စိတ်မရှည်တဲ့မီရှဲအတွက် မုန့်ကိုနယ်ရတာ၊ မုန့်ရလာဖို့[…]
Export ထည်ရဲ့အားသာချက်က ဘရမ်းကိုမှ အသားကောင်း၊ ပုံကျတဲ့ အပြင် ဝယ်ရင် တစ်သောင်းခွဲထက် မပိုတာပါပဲ။
Bystander intervention against street harassment အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို မျက်မြင်တွေ့ရ၊ ကြားရတဲ့ ဘေးလူအနေနဲ့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှု့ခံနေရသူအတွက် သူ့ကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။ ဝေခွဲမရဖြစ်နေရင် အချိန်တစ်နာရီခွဲလောက်ပေးပြီး ဒီအတန်းကို အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘေးလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ထိပါးနှောက်ယှက်ခံနေရသူက်ု အားပေးကူညီနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ[…]
Export ထည် (ပြည်ချစ်ထည်) များနှင့် Outfit of the day! ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးပါ။ အတွင်းအင်္ကျီ + အပေါ် boiler suit နှစ်ခုလုံးပေါင်း ၁၀၀၀၀ တောင် မပေးရပါဘူး။
ရန်ကုန်သူမီရှဲရဲ့ YouTube Channel ကနေလည်း video တွေ ပြန်တင်ထားပါတယ်။ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့က ဖေ့စ်ဘုတ်တစ်ခုတည်း အားကိုးဖို့ လွယ်ကူမနေတော့ ယူကျူ့ကိုပဲ ခြေဦးလှည့်ရတော့မယ်။ တစ်တော့ကိုလည်း ဖယ်ကြဉ်ထားတော့ ကြည့်ရှုသူများများရဖို့က video creator အနေနဲ့ ခက်ခဲ့တယ်။
ဒီတစ်ခါ တကယ်ပေါက်ပေါက်ဖြစ်သွားပါပြီ မိတ်ဆွေတို့ရေ …. ။ ပေါက်ပေါက်လုပ်တဲ့အခါ အဓိကလိုအပ်တာကတော့ ပြောင်းဖူးကိုရင့်အောင်ထားပြီးမှ ချွေထားတဲ့ပြောင်းစေ့ (ပြောင်းကြမ်း) လိုအပ်ပါတယ်။ ပြောင်းမှုန့်၊ ပြောင်းနဲ့လုပ်တဲ့မုန့်အတွက် သုံးတဲ့ပြောင်းအမျိုးအစားပါ။ စျေးထဲမှာ ဝယ်လို့ရတဲ့ပြောင်းအမျိုးအစားက sweet corn အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သကြားဓာတ်ပိုများတယ်၊ အစိုဓာတ်ပိုများလို့[…]
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ နေလို့လည်းပျော်မနေဘူး။ အရာရာခက်ခဲနေချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာဆိုတာ အသေးအမွှားအမှုန်အမွှား သာသာပဲ။